Izixhobo ZaseTshayina Abavelisi beeRotler kunye noThuthi-oThengi-ishini-shishini - iDihoo Industry.
Ikhaya > Iimveliso > Iimpawu ze-Roller no-Rail
I-RIHOO ngumvelisi waseTshayina kumacandelo e-roller kunye nomzila wesitimela, ukubonelela izixhobo ze-roller nomzila ngomgangatho ochanekileyo wemigangatho kunye nezinto eziphathekayo, kwaye unakho phantsi kweemfuno zabathengi ukuzisa izisombululo kwi-design ukwenza. Senza isitokethi sithile semveliso ekhethekileyo - iinqununu ze-roller kunye nomzila wesitimela, nokuba ufuna into encinci, sinokukunikezela ngexesha lokunikela ngokukhawuleza.
W I-Track Roller Bushings
Oku kulandelayo malunga ne-W Track Roller Bushings enxulumene nayo, ndiyathemba ukukunceda uqonde ngakumbi i-W Track Roller Bushings.
Iiplate zeSlide zeStainless
Oku kulandelayo malunga neeSlide zeSlide ezingenasici ezinxulumene nazo, ndiyathemba ukukunceda uqonde ngakumbi iiplati zeSlide zeStainless.
Iiplati ze-Roller Slider
Oku kulandelayo malunga neePlati ze-Roller Slider ezinxulumene, ndiyathemba ukukunceda uqonde ngakumbi iiplati ze-Roller Slider.